Uyifumana njani indlela ephezulu yeShot yePixel 3 kwiPixel 2 | I-Androidsis
UAron Rivas | | Iiselfowuni, Tutorials
Emva kwayo yonke indumiso leyo IBig G Pixel 3 Ndifumene umbulelo kwiikhamera zabo, ifemi izinzile njengophawu olungakhuphi nto kwizixhobo zeefoto zeefowuni eziphathwayo. Ezi zixhobo zingumzekelo woku.
Imisebenzi emininzi enomdla kunye nomona yenziwe kwiPixel 3, njenge Imowudi yokujonga ebusukuOko kusebenza ngokumangalisayo xa sikwiimeko eziphantsi zokukhanya kwaye, nangona kunjalo, sifuna ukuthatha iifoto ngaphandle kokusebenzisa ifleshi, okanye imowudi Phezulu, Elinye inqaku elineenkcukacha ezingezantsi kwaye, ngendlela esichaza ngayo, ungayenza isebenze kwi Pixel 2. Masibone!
1 Yintoni iTot Shot kwaye yenzelwe ntoni?
1.1 Uyenza njani ukuba isebenze kwiPixel 2
1.2 Khuphela apha ifayile ye-apk yeefoto zikaGoogle ngeTop Shot kwi-APK Mirror
Yintoni iTot Shot kwaye yenzelwe ntoni?
Le intsha, enePixel 3 eqhayisayo, isinceda ukuba sikhethe ezona foto zibalaseleyo ngalo lonke ixesha. Ngalo lonke ixesha kuthathwa umpu kwezi fowuni, ayigcinwanga kuphela leyo ibanjiweyo okwangoku, kodwa nangaphambi nasemva kwayo, ewe, ngeTot Shot yenziwe yasebenza. Oku isebenza ukukhetha eyona foto ifanelekileyo, ke iluncedo kakhulu. (Sikufundisa: [APK] Uyifumana njani i 'Super zoom' yeGoogle Pixel 3 kwiPixel 2).
Khawufane ucinge ukuba uza kuthabatha umfanekiso kunye nePixel 2 yakho, kanye ngalo mzuzu, umntu othile osefotweni uvala amehlo akhe. Kwenzeka, akunjalo? Ewe, ngeTot Shot eli thuba liyancitshiswa kuba Ungathathi nje ifoto, kodwa ngaphambili nasemva kwayo. Ke unokukhetha eyona iphume kakuhle.
Uyenza njani ukuba isebenze kwiPixel 2
Oku kulula ngokwenene. Into ekufuneka siyenzile kukukhuphela iifayile zeGoogle kwiifayile zePixel kwiPixel 3 (Khuphela ikhonkco ekupheleni kweposi) kwaye uyifake kwiPixel 2. Kungenxa yokuba iselfowuni ayinalo uhlaziyo kwiVenkile yokudlala kuhlobo olufanayo neflegi entsha yenkampani. Nangona kunjalo, usenokuba nayo kwixa elizayo. Okwangoku, ukuba awunayo eyokugqibela Iiflethi ukusuka kuGoogle, unako Guqula i-Android yakho ibe yiPixel 3 usebenzisa esi sifundo.
Khuphela apha ifayile ye-apk yeefoto zikaGoogle ngeTop Shot kwi-APK Mirror
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » [APK] Ungayifumana njani indlela ephezulu yeShot yePixel 3 kwiGoogle Pixel 2